China Engagqwali grit ifektri abakhiqizi | TAA
* Ingasetshenziselwa ukufaka esikhundleni izihlabathi ezahlukahlukene zamaminerali nama-abrasives angewona okusansimbi, njenge-corundum, i-silicon carbide, i-quartz ye-arenaceous, ubuhlalu bengilazi, njll.
* Ukukhishwa kothuli okuphansi, ukuthuthukisa imvelo yokusebenza, ukulungele imvelo.
* Ingashintsha ingxenye yenqubo yokukha.
* Ukukhishwa kothuli okuphansi nemvelo yokusebenza enhle kakhulu, kunciphisa ukwelashwa kwemfucumfucu yokuchofoza.
* Izindleko eziphansi eziphansi, impilo yesevisi iphindwe izikhathi ezingama-30-100 ukuthi ye-non-metallic abrasive efana ne-corundum.
* Ingasetshenziselwa Imishini Ehlukile: ukuqhuma kwamakamelo namakhabethe wokuqhuma kanye nemishini yokuqhuma isondo eyi-centrifugal.
* Amasistimu wokuqhumisa: Kokubili uhlelo lokuqhuma kwengcindezi, imishini yokuhlanza umoya engenawo umoya iyasebenza.
Ubuningi: ＞ 7.0g / cm3
* Indawo yokuqedela izingxenye ezingekho ayoni
* Ukulungiswa komhlaba ngaphambi kokupenda noma ukumboza
* Ukususwa kobumba kusuka ekusetshenzisweni kokutshalwa kwemali
* Ukudilizwa kwezingxenye zokuphatha ukushisa okungezona ezimbi
* Ukuhlanzwa kwamalunga ashiselwe
* Ukudwetshwa kwezingxenye zepulasitiki ngaphambi kokubopha
* I-Anchor profiling yokupenda ne-powder coat adhesion
Langaphambilini Insimbi engagqwali cut wire shot
Olandelayo: Ukudutshulwa Kwensimbi Ephansi
Sakaza Engagqwali grit
Grit ukuqhumisa Engagqwali
Grit ukuqhumisa Engagqwali Shot
Insimbi Engagqwali Grit Blast Media
Engagqwali Grit ukuqhumisa
Insimbi Engagqwali Grit G18
Engagqwali Grit G25
Insimbi Engagqwali Grit G40
Insimbi Engagqwali Grit G50
Insimbi Engagqwali Grit G80
Insimbi Engagqwali Grit Incazelo
Insimbi Engagqwali Grit Abezindaba
Insimbi Engagqwali Grit Sandblasting
Usayizi Wensimbi Engagqwali
Insimbi Engagqwali Shot Grit
Sponge media abrasive iqoqo lemidiya olwalwenza nesipanji se-urethane njengokunamathela, okuhlanganisa amandla wokuqukethwe wesiponji se-urethane namandla okuhlanza nokusika kwemidiya yokuqhumisa yendabuko. Iphuma ngaphandle ngesikhathi somthelela, iveze ama-abrasives ebusweni ngokuthize nephrofayili eyenziwe. Lapho ushiya indawo, isipanji siyakhuphuka sibuyele ngosayizi ojwayelekile sakha i-vacuum edonsa iningi lokungcola, ngakho-ke ithuthukise is ...
Yenziwe ngocingo oluphakeme lwe-zinc, olukhiqizwa ngokusika i-zinc wire ku-pellets, ubude obulingana nobubanzi bocingo. I-Zinc Cut Wire nayo iyatholakala ngendlela enesimo esetshenziswa njengenye indlela ehlala isikhathi eside yokwenza i-zinc shot. Lezi zilungele ukuqeda ukuqeda nokufa kwabantu, ngokuvamile kwimishini yokuqhuma kwamasondo. Kutholakala ngamanani anekhono, imikhiqizo yethu inciphisa ukuguga ezintweni zokuqhuma uma kuqhathaniswa neminye imicibisholo yensimbi. ...
Izici ■ Uthuli Oluphansi --- Ukuqina okuphezulu kwangaphakathi kanye nenani eliphezulu lalokho uqobo kusheshisa izinga lokuhlala futhi kunciphisa kakhulu ukukhishwa kothuli nothuli oluvela emsebenzini, kunciphisa umzamo wokuhlanza isihlabathi, kunciphise ukungcoliswa kwendawo yomsebenzi. ■ Ikhwalithi ephezulu ye-Surface --- Ingangena ekungeneni nasezingxenyeni ezingalingani ukuhlanza, ngaleyo ndlela isuse ngokuphelele ukugqwala, usawoti oncibilikayo nokunye ukungcola; ebusweni blastin ...
Izici I-Alumina oxide abrasive inobulukhuni obuphakeme futhi i-angular ebukhali, isetshenziselwa kabanzi ukuqhuma okumanzi nokomile, okwenza iphrofayili efanelekile yokulungiselela ubuso. I-Alumina oxide abrasive umqondo wokuqhumisa abezindaba abrasive bokulungiselela ubuso obucela i-ferrous free. Alumina oxide olwalwenza kuyinto kahle eliphezulu ukuqhumisa abrasives nge imiphetho ebukhali futhi ukuminyana. Iyasebenza futhi futhi ingasetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zomshini wokuqhumisa. ...